प्रेमिकालाई कसरी खुसी राख्ने ? यस्ता छन् ७ टिप्स’ – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठरोचकप्रेमिकालाई कसरी खुसी राख्ने ? यस्ता छन् ७ टिप्स’
प्रेमिकालाई कसरी खुसी राख्ने ? यस्ता छन् ७ टिप्स’
Sudur Samaj | Saturday October 17, 2020	Comments
स्वभाविक रुपमा ब्वाइफ्रेन्डले आफ्ना ब्वाइफ्रेन्डप्रति अपेक्षा राख्छन् । उनीहरु चाहन्छन्, आफ्ना ब्वाइफ्रेन्ड समझदार होस् । स्मार्ट होस् । फेसनेवल होस् । रोमान्टिक होस् । व्यवहारिक होस् । तर, यति मात्र काफी छ त ? प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न अरु केही सूत्र जान्नुपर्छ । गर्लफ्रेन्डको कति अव्यक्त चाहाना हुन्छ, जो ब्वाइफ्रेन्डले बुझ्नुपर्छ । अक्सर गर्लफ्रेन्ड चाहन्छन् कि आफ्ना ब्वाइफ्रेन्डले केयर गरुन्, हरेक कुरा साझेदार गरुन् । यदि उनीहरुको मनोविज्ञान बुझेर त्यही अनुसार आफुलाई पेश गर्न सकियो भने प्रेम जीवन सुमधुर र कसिलो हुन्छ । रसिलो पनि । यसका लागि ब्वाइफ्रेन्डसँगे केही टि्रक्स भने हुनैपर्छ । जस्तो, ****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,*****
१ साथ दिनुपर्छ
जब कुनै युवती प्रेममा पग्लन थाल्छे, उनीहरुलाई ब्वाइफ्रेन्डको साथ चाहिन्छ । उनीहरु ब्वाइफ्रेन्डको सामिप्यता चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको चाहानालाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । गर्लफ्रेन्डसँग समय बिताउने प्रयास गर्नुपर्छ । हरेक दिन भेट्न संभव नभएपनि उनीहरुको सम्पर्कमा रहनुपर्छ । गर्लफ्रेन्डमा यस्तो महसुष हुनुपर्छ कि, मेरो ब्वाइफ्रेन्ड सधै मेरो साथमा छ । यसले उनीहरुमा प्रेम र सुरक्षाको भाव जगाउँछ ।
२ हरेक पल साझेदार गरौं
३ प्रेम व्यक्त गरौं
४ फिल्म हेराउने
५ निक नेम राख्ने
७ प्रशंसा गरौं
यसकारण युवतीहरु अग्ला केटा मन पराउँछन्